KULMIYE Party » 2008 » August
Xoghayaha Cusub Ee Arrimaha Dibadda ee Xisbiga KULMIYE oo loogu yeedhay ka qaybgalka shirweyne ka dhacaya Itoobiya
August 30th, 2008 in Uncategorized | Comments Off
Xoghayaha Arrimha Dibadda ee Xisbiga KULMIYE, Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar, ayaa saaka oo Sabti ah ah, 30 August, u duulay magaalada Addis-Ababa ee dalka Itoobiya oo uu kaga qaybgalayo shirwayne lagaga hadlayo sidii nabad loogu dhammayn lahaa colaadaha ka dhex aloosan wadamada ku yaalla geeska Afrika.
Shirwaynahan waxaa ka qaybgalaya wakiillo ka kale socda dalalka geeska Afrika, hay’ado caalami ah, Ururka Midowga Afrika iyo aqoonyahanno ku xeel dheer xal u helidda colaadaha iyo horumarinta nabadda iyo dimuqraadiyadda. Waxaana la filyaa in si qoto dheer loogu lafaguro khilaafaadka siyaasadeed iyo xasilooni darada ka taagan meelo ka mid geeska Afrika. Arrimaha sida gaarka ah loo eegayo waxaa ka mid ah khilaafka u dhaxeeya Itoobiya iyo Eritariya, ciidamada Itoobiya ee jooga dalka Soomaliya, arrinta Daarfuur, ladagaalanka argagixisada iyo kobcinta nabadda iyo dimoqraadiyadda.
Dr. Maxamed Cabdillaahi oo intii aanu dhoofin ay Somaliland.Org wax ka waydiisay shirkan wuxuu yidhi “ Horta waa markii ugu horaysay ee ay Soomaliland si buuxda uga qaybgasho kulammo noocan oo kale ah fikkerkeedana ka dhiibato xiisadaha ka taagan gobolka aynu ka mid ka nahay”. Waxaanu raaciyaya “ Siyaasadda dibadda ee xisbiga KULMIYE waxay ka shaqaynaysaa sidii Soomaliland looga saari lahaa go’doonka ay hadda ku jirto, loona abuuri lahaa jawi ay Soomaliland ku dhex gasho dunida, codkeedana looga maqli lahaa fagaarayaasha caalamiga ah iyo kuwa gobolkaba” Waxaanu kaloo sheegay in siyaasadda dibadda ee Kulmiye ay ku eegayso arrimaha mandaqadda aragti balaadhan.
Mar aanu wax ka waydiinay waxa ay siyaasadda dibadda ee KULMIYE kaga duwan tahay ta xukuumadda waxuu yidhi “ Siyaasaddayada dibaddu waxay si dhab ah uga turjumaysaa masalaxadaha iyo danaha aasaasiga ah ee shacabka Soomaliland, sida ganacsi xor ah, ilaalinta nabadgalyada dalka iyo ta gobolka, helitaan saaxiibo caalami, iskaashi horumerineed iyo in Soomaliland oo ka mid noqota bulshada caalamka, iyo codkeeena oo adduunka laga maqlo”. Lakiin buu yidhi “Siyaasadda khaarijiyadda ee xukuumaddu waxay ku jahaysan tahay sidii maamulka Rayaale uu u sii jiri lahaa. Xidhiidhka dibadda ee xukuumaddu inta badan wuxuu ka dhaxeeyay shakhsiyaad xukuumadda Soomaliland ka mid ah iyo kuwa shisheeye ah. Matalan ganacsiga waa mid u danaynaya shakhsiyaad shisheeye iyo kuwa ku tirsan xukuumadda, qandaraasyada xukuumaddu la gashay shirkadaha ajinabigu waxay u gaar yihiin shakhsiyaad xukuumadda ku jira iyo ku shisheeye oo kaliya, xidhiidhada dibadda ee xukuumaddu la leedahay wadamada kale shacabka Soomaliland iyo golayaasha qarankuba waxba kama oga. “Dhawaanna waxay xukuumuuddu tilmaamtay in Soomaliland ay ka jirto argagixiso wadani ah. Arrintani waxay keeni kartaa in dawladdaha jaarku ama kuwa ka xoog rooniba ay indho colaadeed ku eegaan shacabka Soomaliland, maamulka Rayaalana lagu taageero inuu cadaadiyo shacbkiisa, oo ah dariiqii TFG da mid u dhow. Sida awgeed siyaasadda dibadda ee xukuumaddu uma adeegayso danaha shacabka Soomaliland ee waxay ka hawlan tahay mustaqbalka kordhinta maamulka Rayaale” ayuu yidhi Dr. Maxamed Cabdillahi Cumar.
Sanadka horaantiisii wuxuu Dr. Maxamed Cabdillahi Cumar, oo ka wakiil ahaa Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Axmed Siilaanyo, ka qaybgalay shirwayne caalami ah oo ka dhacay magaalada Belfast ee Woqooyiga Ireland oo ay ka soo qaybgaleen madaxwaynayaal iyo hogaamiyayaal magac ku leh dunida. Waxay hawlahani muujinayaan in xisbiga KULMIYE uu hadda si wayn uga shaqaynayo siyaasadda dibadda ee Somaliland. xigasho/ Somaliland.Org News Desk London England
Laanta Xisbiga Kulmiye Ee Gobolka Minnesota Oo Shiweynahoodii Sanadlaha Ahaa Ku Doortay Gudi Cusub
August 28th, 2008 in Uncategorized | Comments Off
Kulmiye.info,Minnesota-Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye oo gobolka Minnesota, USA ayaa maalintii Axadda ee bisha August ahyd 24-ka shirkoodii sanad laha ahaa ku qabsaday magaalda Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE oo ku baaqay in xisbigu ka wadashaqeeyo soo celinta labada musharrax iyo taageerayaashooda cadhooday: Khudbadihii musharaxiinta la doortay
August 27th, 2008 in Uncategorized | Comments Off
Musharaxa Madaxweynimada Loo Doortay Ee Xisbiga Kulmiye Dhinaca Bidixda Xiga Mudane Axmed Siilaanyo Iyo Musharaxa Madaxweynekuxigeenka Loo Doortay Ee Xisbiga Kulmiye , Dhinaca Midigta Xiga Mudane Cabdiraxman Saylici
Burco (Somaliland.org) – Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa khudbad uu ka jeediyey xidhitaankii Shirka Golaha Dhexe ee xisbiga uga socdey hotelka Plaza ee magaalada Burco, kadib markii loo doortay musharraxa Madaxweynaha ee xisbiga waxa uu ugu baaqay xisbiga isku duubni iyo inay wadajir uga shaqeeyaan sidii loo raadin lahaa, loo raalligelin lahaa, dibna loogu soo celin lahaa musharraxiinta iyo xubnaha xisbiga ee ka maqnaaday shirka maanta, iyaga oo ka cadhooday doorashada.
Guddoomiyaha iyo ninka loo doortay musharraxa Madaxweynekuxigeenka xisbiga, Cabdiraxmaan Ismaaciil (Saylici) ayaa labaduba khudbad mahadnaq ah u jeediyey shirka Golaha Dhexe, kadib doorashada.
Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Axmed Siilaanyo oo ugu horeyn halkaa ka hadlay markii loo doortay inuu xisbiga uga tartamo jagada M/weynaha doorashada madaxtooyada ayaa ugu horey u Mahad-naqay xubnaha golaha dhexe iyo shirgudoonka golaha,waxaanu hadalkiisa ku bilaabay:
“Waxaan marka hore hambalyo aad iyo aad u balaadhan halkan uga jeedinayaa xisbiga Kulmiye golahiisa dhexe iyo shirgudoonkiisaba. Shirkan golaha dhexe wuxuu ahaa shir ummaddu sugaysay, shir xisbigu sugayay, shir dalka oo dhan iyo dunidaba laga xiiseynayay oo looga fadhiyay waxa ka soo baxa iyo natiijadiisaba. Shirkan golaha dhexe dad badan oo aan jeclayn horumarka Somaliland ama dad badan oo u arkayay in shirkaa waxa ka soo baxa uu saamayta uu cid walba ku yeelanayo ayaa wadnaha farta kaga hayey, qaar badanina rajadoodey qabeen oo Illaahay uga baryayeen in shirkaasi guuleysto iyo xisbigaasi, qaar badanina way ka naxayeen. Maanta waxaan leeyahay waxa aad iyo aad u farxay oo aad mabsuud uga ah intii wanaagga la jeclayd xisbiga, taageerayaashiisa dhabta ah iyo xubnihiisa iyo intii dalka danaynaysey oo dhan baa ku farxay baan leeyahay shirka halkan ka dhacay.
Waynu malayn karnaa, waa wax iska dabiici ah oo jira oo shir kasta oo la isugu yimaaddo in dad walaalo ah oo damac siyaasadeed ay ku tartami karaan waa loogu talagalay, waa aasaaska siyaasadda, waana taynu doonayno inaynu dalka ku hagno, waana dimuqraadiyadda aynu doonayno inaynu ku tallaabsano xisbi ahaan iyo qaran ahaanba. Haddaynu doonayno inaynu dimuqraadiyad ku tallaabsano oo aynu ku hoggaamino waxa waajib inagu ah inay gudaheenna ka muuqato.”
Axmed Siilaanyo waxa uu intaas ku daray in shirkan Golaha Dhexe iyo Shirweynihii ka horreeyey ee lagu qabtay Hargeysa labadaba ay ka muuqatey dimuqraadiyad. Isaga oo sharraxaya macnaha dimuqraadiyaddana waxa uu yidhi,
“Dimuqraadiyaddana macnaheedu waxa weeye inuu qofku cabiro dareenkiisa, inuu qof waliba la soo baxo hungurigiisa iyo damaciisa, waana mid uu xaq u leeyahay, laakiin, in loo wada dhammaado, laguna hoggaansamo jidka loo jeexay ee dimuqraadiyadda, oo maxay ah? Qofkii doonaya inuu isa soo sharraxo oo damaciisa soo dhigo halkaa, laakiin, u hoggaansamo wixii soo baxa. Ta maanta dhacday waa tii”.
Waxana uu intaa ku daray oo uu ka warramay sida uu u arko musharaxixiinta iyo xubnaha ka maqnaaday shirka.
“Waxa jira xubno ka mida xisbiga oo damacsanaa ama jeclaa inay isu taagaan hoggaaminta siyaasadda xisbiga iyo ta qarankaba. Dadkaa waxna ma soo bixin, waxna way soo baxeen. Kolley maadaama aan anigu soo baxay waxaan jecelahay inaan idhaahdo walaalahayga aan soo bixin aad baan uga xumahay in damaciinii sidii aad jecelaydeen aanay u dhicin,” ayuu yidhi Guddoomiye Siilaanyo.
Waxana uu raaciyey, “Inteenna yar cadhootay ama wax yar tirsatayna ay raalli noqdaan. Kulligeenna waxaynu ka wada shaqaynaynaa oo maanta wixii ka dambeeya aynu ku shaqaynaynaa inaynu raadino, doonno, soo celino walaalaheennii aan sidii ay doonayeen wax ugu dhicin. Waynu isa saamaxaynaa, kale ayaynu gacanta is qabsanaynaa, waynu wada hawlgelaynaa, meel baynu u wada jeesanaynaa, dadkeenna iyo dalkeenna ayaynu daacadnimo ugu shaqaynaynaa, waxaynu ku hoggaaminaynaa sharciga iyo dastuurka, waxaynu ku hoggaaminaynaa wixii ummadda danteeda ah. Insha allaahu Illaahayna wuu inagu guuleyn doonaa caam ahaanteen, kulligeenna waxaan Illaahay ka baryaynaa inaynu meel u wada jeesano, dalkeenana kuwii Illaahay ku anfaco, hoggaamintiisana hanta inaga dhigo”.
Guddoomiyaha, mudane Axmed Siilaanyo waxa uu ammaan iyo bogaadin gaar ah u jeediyey Prof. Ismaaciil Muumin Aare oo ka mid ahaa musharraxiintii Madaxweynekuxigeenka, balse, isagu doorashada ka hor ka tanaasuley, isla markaana taageeray Cabdiraxmaan Saylici. Waxana uu sheegay in Prof. Ismaaciil iyo taageerayaashiisu ay hore u caddeeyeen inay taageerayaan wixii ka soo baxa shirka, tiina uu ka dhabeeyey.
“Rag kale oo badan baan jecelahay oo maanta halkan inagaga maqan inay sida Ismaaciil oo kale yeelaan oo ay inala wadaagaan isu hambalyaynta aynu isu hambalyaynayno,” ayuu yidhi.
Musharraxa Madaxweynekuxigeenka ee Xisbiga KULMIYE, Cabdiraxmaan Saylici ayaa isaguna khudbad uu halkaa ka jeediyey waxa uu u mahadnaqay dhammaan xubnaha xisbiga KULMIYE iyo gaar ahaan, xubnaha Golaha Dhexe oo uu uga mahadnaqay xilka ay u doorteen ee musharraxnimada.
Isaga oo isu sharraxayana waxa uu yidhi, “Walaalayaal, waxaan ahay ninka aad musharraxa Madaxweynekuxigeenka u doorateen. Waxaan ahay nin dalka iyo dadka gurmad u ah oo raba inuu ka mid noqdo dadka raba dhibaatooyinka maanta jira inay wax ka beddelaan”.
“Waad ogtihiin dhibaatadii dalkan iyo dadkan uu u geystey maamulkii kelitaliska ahaa waxaa lagaga saaray qori, raggii taariikhdaa ku suntanaana maanta badankoodii halkan bay inala joogaan, intii dhimatayna alle ha u naxariisto,” ayuu raaciyey.
Waxana uu sheegay inuu isaguna doonayo inuu isku sunto “Halganka Dimuqraadiyadda” isaga oo sheegay in halgankii dalkan lagu xorreeyey aanu gaadhin halkii la rabey.
Mudane Saylici waxa uu ballanqaaday inuu markasta u hoggaansamayo danta KULMIYE, danta Qaranka iyo shuruucda iyo talooyinka xisbiga iyo dadkiisa.
Xigasho/ C/risaaq M. Dubbad, Somaliland.org, Burco.
August 26th, 2008 in Uncategorized | Comments Off
Burco (Somaliland.org) – Shirka Golaha Dhexe ee xisbiga KULMIYE ee ka socda Hotelka Plaza ee magaalada Burco ayaa doortay musharraxiinta Madaxweynaha iyo Madaxweynekuxigeenka.
Khudbado hoggaanka xisbiga KULMIYE u jeediyeen Shirka Golaha Dhexe ee ka socda City Plaza, Burco
August 24th, 2008 in Uncategorized | Comments Off
Burco (Somaliland.org) – Kadib markii shirku doortay hoggaanka Golaha Dhexe waxa halkaa khudbado ka jeediyey xubno ka tirsan hoggaanka xisbiga KULMIYE, kuwaas oo ku aaddanaa shirka iyo hawlaha u yaalla iyo weliba guud ahaan arrimaha xisbiga u yaalla ee dalka.
Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Xaaji Axmed Maxamuud Maxamed “Siilaanyo” ayaa hadal uu ka jeediyay shirka golaha dhexe ee xisbiga Kulmiye waxa uu ka waramay xaalada dalku marayo iyo qiimaha shirkani ummadda reer Somaliland u leeyahay.
Guddoomiyuhu waxa uu ugu horrayn u mahadnaqay Guddidii soo qabanqaabisay Shirka Golaha Dhexe, xubnaha Golaha Dhexe iyo martisharafta ka soo qaybgashay. Intaa kadibna waxa uu hadalkiisa ku bilaabay:
“Maanta halkan ka soo jeedin maayo khudbad dheer, erayaal aan isleeyahay waa muhiim inaynu markasta is xasuusino baan isku koobayaa. Waynu ogeyn, wakhti aan fogeyn oo ahayd 29-31 March waxaynu qabsanay Shirweynaheennii xisbiga oo ahaa Shirweyne aad la isugu yimi, aadna loogu diyaargaroobey, ayna inagala soo qaybgaleen martisharaf adduunka oo dhan ka kala timi iyo gudahaba. Halkaa waxaynu ku soo bandhignay barnaamujka xisbiga KULMIYE oo dhinacyo badan leh oo ah Siyaasaddii iyo Vision-kii iyo aragtidii xisbiga KULMIYE, isla wakhtigaan waxaan qudhaydu ku soo bandhigay guddoomiye ahaan hadal dheer oo dhinacyo farabadan leh oo ku saabsan taariikhda uu soo maray xisbiga KULMIYE, siduu ku aasaasmay, meelaha uu ka furan yahay (Xisbigu) ee dunida daafaheeda iyo dalka gudihiisaba. Waxaynu ku soo bandhignay ujeeddooyinka badan iyo Visions-ka aynu u aragno inaynu dalka iyo ummadda ku hanan karno, kuna hagi karno. Waxaynu ku soo bandhignay dhalliilaha faraha badan ee maamulka maanta dalka ka dhisan iyo UDUB ay u tahay sabab. Sida ay dalka uga lumisay dariiqii dimuqraadiyadda, sida ay aad iyo aad uga baydhsan yihiin himilooyinkii dalka iyo dadku uu lahaa ee caddaalad lahaa, ee horumar lahaa, ee dhiirrigelin lahaa, hadday xagga dhaqaalaha tahay xagga bulshada horumarinteeda, mid reer miyi iyo mid nololeed iyo mid walba. Waxaynu aad u muujinay caddaalad-darada dalka ka socota, marka ashkhaas ahaan la eego iyo marka la eego dhinac kasta oo ay tahay. Waxaynu soo bandhignay waxyaabihii aynu kaga baxayney oo dhan. Waxaynu soo bandhignay vision-ka iyo aragtida aynu ka leenahay ee barnaamujkeenuna uu maanta xambaarsan yahay, kaas oo ah inaynu dhisno maamul dowladeed oo marka hore noqda mid dadka iyo dalka u adeega ee aanu noqon mid ku shaqaysta dadka isagu oo raxmaddu ka guurtey oo aan dan iyo muraad toonna ka lahayn”.
Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in xaaladahaas ay kaga warrameen Shirweynihii xisbiga ee dalku marayey ay hadda ka sii dartay, waxana uu soo qaatay kootada la geliyey ganacsiga Xoolaha nool oo beryahan dambe dalka ka abuurtay xiisad, isaga oo sheegay in nolosha dadka reer Somaliland ay ku tiirsan tahay neefka xoolaha ah, isla markaana dadkeenu ay ku jiraan xaalad adag oo nololeed, balse, mintidnimada iyo dedaalka dadku uu suurageliyey inay neefkoodaa adhiga ah ka soo saaraan noloshooda.
“Markay wixii kale oo dhan soo dhaaftay, musuqmaasaqii xadhkaha goostay iska daa, waxaynu ognahay in loo soo dhigtay, xoolihii qofka reer miyiga ahi lahaa ee ahaa waxa dadkeennu ku nool yahay in dowladdii iyadii tidhi anigaa xoolahaagii iibinaya oo qandaraas cid kula gashay oo wax aan weligeed taariikhda dhicin ay abuurtay wax la yidhaahdo Monopoly,” ayuu yidhi Guddoomiye Axmed Siilaanyo.
Waxana uu sheegay in waxkasta oo ay xukuumaddu sheegtay in laga faa’iidayo ninka Sucuudiga ah ee Xoolaha loo xidhay, sida inuu furayo xayiraaddii Sucuudigu saaray xoolaha nool, aanay faa’iido lahayn, maadaama ayuu yidhi fikradda kootada qofka loo xidhaa ay tahay in qiimo kasta oo uu isagu doono uu siisto xoolaha, qiimo kasta oo uu dunida ka joogona tiisu khasab tahay.
Waxa kale oo uu sheegay Guddoomiyuhu in xukuumaddu aanay intaas keliya ku joogin ee toddobaadkana ay soo rogtey inay cashuur ka qaaddo 100 ka Doollar ee qofka dibadda looga soo diro.
“Markay macaadintii iibisey ee ay qandaraas ku gashay, ee kalluunkii iibisey ee xoolihii iibisey ee qandaraas ku gashay ee mid walba dadkii lahaa gacantiisa ka saartay waxay maanta maraysaa inay tidhaahdo shilinkii dibadda lagaaga soo dirona cashuur baad ka bixinaysaa intaanay xawaaladda ka bixin.,, Halka ay maraysaa horta waa halkaa,” ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
Axmed Siilaanyo waxa kale oo uu xusay tacaddiyo xukuumaddu kula kacday shacbiga, sida dhacdadii Dumbuluq ee caruurta muddaharaadaysa la laayey. Waxana uu sheegay in xukuumadda maanta talada haysaa ay tahay mid ku meelgaadh ah, loogana baahan yahay xisbiga KULMIYE inuu beddelo si uu dalka ugu soo celiyo caddaalad, dimuqraadiyad iyo maamulwanaagsan.
Guddoomiyuhu waxa uu ka jawaabey wararka xisbiga KULMIYE had iyo goor laga faafiyo ee ah inuu khilaaf gudihiisa ka jiro, kaas oo uu sheegay in aanu jirin khilaaf balse, uu muujinayo dimuqraadiyad, isla markaana uu doodayo. Waxana uu ku guubaabiyey xubnaha Golaha Dhexe ee xisbiga inay ilaaliyaan dhaqankaa dimuqraadiyadda ah ee xisbiga gudihiisa ka jirta, isla markaana ay isku duubnaadaan oo aanay doodahaa u qaadan isqabad iyo khilaaf.
“Weli xisbiga UDUB oo ishaya miyaad maqasheen? Weli xisbiga UDUB oo shiraya miyaad maqasheen? Ciddaas baa UDUB wax ka doonaysa miyaad maqasheen?” ayuu yidhi Guddoomiyuhu, waxayna dadku ku dhawaaqayeen “Maya”.
Muj. Muuse Biixi Cabdi, Guddoomiyekuxigeenka 1aad ee xisbiga, waxana uu hadalkiisa ku bilaabay, “Waxaan marka hore shirka ka raaligelinayaa dib u dhicii shalay ee aanu shalay dib u dhacnay”.
Muuse Biixi, waxa uu ka warramay dhibaatooyinka dhinacyada badan leh ee maanta dalka ka taagan iyo sida Xisbiga KULMIYE uu yahay rajada keliya ee dadka reer Somaliland eegayaan.
Waxana uu talooyin u soo jeediyey, musharraxiinta u tartamaya musharraxiinta xisbiga ee Madaxweynaha iyo Madaxweynekuxigeenka, xisbiga KULMIYE guud ahaan iyo xubnaha Golaha Dhexe ee xisbiga. Xisbiga iyo Hoggaankiisa waxa uu u soo jeediyey in aanay ujeeddadu ahayn in ay beddelaan ashkhaasta maanta dalka hoggaamisa, sida ay u dhaqmayaanna ay u dhaqmaan, balse, looga baahan yahay daacadnimo iyo inay ka run sheegaan ballanqaadka. Musharraxiinta Madaxweynaha iyo Madaxweynekuxigeenkana waxa uu u soo jeediyey, isaga oo mid mid u magacaabay Guddoomiyaha xisbiga Axmed Siilaanyo oo u taagan musharraxa Madaxweynaha, iyo 4ta xubnood ee u taagan musharraxa Madaxweynekuxigeenka, inay ogaadaan in laba qof uun la dooranayo, sidaa darteed ay isu haniyeeyaan oo ay ku qancaan. Waxana uu u ballanqaaday hoggaanka xisbigu in aanay u kala hiilinayn ama aanay mid ka mid ah musharraxiinta garab xaqdarro ah, isaga oo dhinaca kalena ka dalbaday inay u qabsoomaan, marka xisbigu qabto.
Sidoo kale, xubnaha Golaha Dhexe ee codaynaya, waxa uu sheegay in ay kala taageersan yihiin musharraxiinta tartamaysa. Sidaa darteed, waxa uu u soo jeediyey qofka musharraxiisa laga guuleysto in aanu boodin.
Guddoomiyekuxigeenka 2aad ee xisbiga, mudane C/raxmaan Cabdulqaaddir Faarax ayaa isaguna halkaas ka hadlay, waxana uu ka warramay taageerada xisbiga Kulmiye wakhtigan ku haysto shacbiga Somaliland. Balse, waxa uu ka digey in taageeradaasi iyo guusha xisbigu filayo ay lumi karto haddii aan loo diyaargaroobin diiwaangelinta codbixiyayaasha.
“Dadku wuxuu u heellan yahay KULMIYE, foodkiina waa la diyaar, laakiin, waxaan u kacay inaan wax yar ka idhaahdo diiwaangelinta dhowaan ka dhacaysa dalka, waxaanan idiin sheegayaa in hadii aynaan isdiiwaangelin inaynaan guulaysanayn markaa waxa la inooga baahan yahay inaynu dadkii ku wacyi gelino sidii aynu diiwaangelintaa ugu soo bixi lahayn,” ayuu yidhi mudane Cabdiraxmaan Cabdulqaaddir.
Waxana uu raaciyey, “Ilmaadeerayaal, waxaan idinka baryayaa markaynu shirkan ka baxno aynu dib ugu noqono dadkii oo aynu bilowno ololihii dadka aynu ku wacyi gelin lahayn. Shacbiga reer Somaliland-na mid baan leeyahay, sidaa uu gudoomiyuhu sheegay waad aragtaan in wax walba xukuumadii kooto ugu xidhay cid gaara markaa inta aan idinkana kooto la idiin bixin dadoow oo sida shiidaalkii, kalluunkii, Adhigii iyo khayraadkii dalka kootada loogu xidhay aynu ka hortagno sidii maamulkan aynu u bedeli lahayn”.
Shirka Golaha Dhexe waxa maanta lagu doortay Shirguddoonka Golaha Dhexe oo ka kooban Guddoomiye, Guddoomiyekuxigeenka iyo Xoghaye, isla markaana waxa xubnaha loo qaybiyey barnaamujka siyaasadeed ee xisbiga, waxaana lagu soo gebagebeeyey khudbadaha hoggaanka xisbiga.
Berrito ayaa la filayaa in shirku uu doorto musharraxiinta Madaxweynaha iyo Madaxweynekuxigeenka ee xisbiga.
Xigasho/ Cabdirizaq Dubad- Somaliland.org, Burco.
Shirweynihii Golaha Dhexe Oo Dib U Furmay Saaka
Burco, Somaliland- Shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga Kulmiye ayaa saaka 0800 subaxnimo dib uga bilaabmay huteelka weyn ee Burco City Plaza kadib markii shalay loo hakiyay geeridii ku timid gudoomiye ku xigeenka 1aad ee golaha wakiilada Md Cabdilcasiis Maxamed Samale hooyadii EBBE naxariistii janada ha ka waraabiyee iyo arimo farsamo. Waxaa shirweynaha ka soo qayb galay tiro dhan 200 oo qof oo kala ahaa xubnaha golaha dhexe ee xisbiga iyo marti isugu jiray goob joogayaal iyo marti sharaf kaleba. Waxaa martida ka soo qayb gashay ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Jamac Cabdillahi Biin oo ku furay shirkaas erayo kaftan ah oo ku sheegay in xisbigiisa UDUB kala jab xisbiga Kulmiye ku yimaada uu naawilayo marka la kala saarayo murashaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenadaba. Mr biin waxaa shirka uga rajaeeyay inuu guulaysto isla mar ahaantaasna wuxuu ku ducaystay in xisbigiisa UDUB noqdo kii kaga dayda shirkan oo kale xisbiga Kulmiye.
Shirweynahan golaha dhexe oo maalintii shalay u hakaday arimo farsamo ayaa lagu soo dhameeyay jawi aad u wanaagsan. Shirweynahan golaha dhexe ayaa saaka lagu ansixiyay 59 xubnood oo aan hore shirweynihii xisbiga ee bishii March lagu ansixin. Shirweynahan ayaa la rajaynayaa inuu soo gaba gabgaboobi doono maalinta isniinta hadii EBBE xukmo.
Kala Soco Halkan
War Baahinta Xisbiga
” INNA LILLAAH WAA INNA ILAYHI RAAJUCUUN ” Tacsi Ku Socota Gudoomiye Ku Xigeenka 1aad Ee Golaha Wakiilada Mudane Cabdilcasiis Maxamed Samaale
Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye mudane Axmed Maxamed Maxamud Siilaanyo isaga oo ku hadlaya magaciisa magac xubnaha xisbiga ee dalka gudihiisa iyo xubnaha taageerayaasha ah ee dalka dibadiisa jooga, waxa uu halkan tacsi uga soo gudbinayaa mudane Cabdilcasiis Maxamed Samaale, geerida ku timid hooyadii EBBE naxariistiisa wanaagsan janadii Fardowsa ha ka waraabiyee. Waxaa uu gudoomiyuhu EBBE uga baryayaa in marxuumada janadii Fardowsa ALLE ka waraabiyo mudane Cabdilcasiis, ehelkii iyo qaraabadiina samir iyo iimaan ka wada siiyo , aamiin.
Waxaa kale oo halkan tacsi taa la mid diraya dhamaan taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee dalka dibadiisa iyo gudahiisaba ku sugan. Waxaa si gaar ah iyaguna tacsi na soo gaadhsiinaya gudoomiyaha,ku xigeenka iyo gudida iyo xubnaha ka tirsan mareegta egroupka xisbiga Kulmiye oo kala jooga daafaha caalamka.
Waxaa tacsi taa la mid ah na soo gaadhsiinaya iyaguna laamaha xisbiga ee waqooyiga Maraykan oo kala ah Columbus, Minniapolis, Washington DC, Harford Ct, Los Angels Ca, Seaatle Washington iyo Atlanta Ga. Laamaha dalka Canada ee kala ah Toronto, Ottawa iyo Edmonton
Waxaa tacsi taa la mid u soo diraya gudoomiyaha 1aad ee golaha wakiilada isla laamaha UK ee kala ah north London, East London, West London, Bristol, Cardiff, Birmingham, Shefield , leicster iyo jaaliyada Manchester and Bolton. laamaha Norway oo isu wada dhan, Denmark iyo Sweden.
Waxayna dhamaantoo marxuumada EBBE uga barayaan inuu janadii Fardowsa ka waraabiyo mudane samaale , walaaladii ehel iyo qaraabadiina samir iyo EEBE ka wada siiyo, aamiin
Shirweynaha Golaha Dhexe Ee Xisbiga Kulmiye Oo Maalinta Axada Dib Loogu Dhigay, Halkan Ka Daawo Sawiradii Shirka
August 23rd, 2008 in Uncategorized | Comments Off
Burco, Somaliland - Shirweynihii golha dhexe ee xisbiga Kulmiye ayaa saaka 0800 subaxnimo si rasmi ah uga bilaabmay hoolka shirarka huteelka weyn ee Burco City Plaza inkasta oo maalinta Axada ah dib loogu dhigay. Waxaa halkaa dadkii ka soo qayb galay ka mid ahaa xubno aad fara badan oo golaha dhexe ka tirsan isuguna jiray kuwa dalka gudihiisa jooga iyo xubno qurba joog ahba. waxaa kale oo ka mid ahaa xildhibaanada ku soo baxay magaca xisbiga Kulmiye iyo madaxda sarsare ee xisbiga oo uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga Kulmiye md Axmed Maxamed Maxamud Siilaanyo, gudoomiye ku xigeenka 2aad mudane Cabdiraxmaan cabdilqadi farax, gudoomiye ku xigeenka 3aad mudane cabdiraxman Talyanle, gudoomiye ku xigeenka 4aad mudane cabdiraxman Saylici iyo marti sharaf kale oo ah goob joogayaal.
Shirka oo ay ahayd in uu maanta oo 23 August inuu si rasmi ah u bilaabmo isla mar ahaantaasna haystay tiro aad uga badan tiradii uu kooram ahaan ku qabsoomi lahaa ayaa misna u hakaday gudoomiye ku xigeenka 1aad ee golaha wakiilada mudane Cabdilcasiis Maxamed Samaale oo hooyadii ILLAAHAY naxariistii Janada Fardowsa ha ka waraabiyee xalay ku geeriyotay magaalada Hargeysa halkaas oo isaguna xalay u ambabxay magaalada Hargeysa. Waxaa kale oo shirka loo hakiyay in la sugo gudoomiye ku xigeenka 1aad ee xisbiga iyo xoghayaha guud ee xisbiga oo ku sugnaa maanta oo sabti ah magaalada Hargeysa balse hada la soo xaqiijiyay in ay yimaadeen magaalada Burco caawadatan.
Waxa shirku si rasmi ah dib ugu bilaabmi doona maalinta Aaxada ah ee barito halkaas oo loo guda gali doono hawlaha horyaal shirka.
Shirweynahan golaha dhexe ee xisbigu ayaa socon doona mudo laba maalmood ah oo lagu soo dooran doono murashaxa madaxweynaha iyo murashax ku xigeenka xisbiga Kulmiye uga qayb gali doona tartanka doorashooyinka soo soo socda.
Warbaahinta xisbiga kulmiye
Axmed Siilaanyo Oo Xukuumada Ku Tilmaamay Mid Aan Xishoonayn
August 13th, 2008 in Uncategorized | Comments Off
Hargeysa(Geeska)- Guddoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Md. Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa xukuumadda Somaliland ku tilmaamay mid aan xishoonayn, oo dalkeeda ku soo jeedinaysa indhaha quwad shisheeye, waxaanu ugu baaqay inay xishooto.
Guddoomiye Axmed-Siilaanyo, oo shalay galab ka soo noqday madasha shirka Beelaha Habar-jeclo ee magaalada Gar-adag ee gobolka Sanaag, waxa sidaas ku sheegay waraysi khaas ah oo uu xalay magaalada Hargeysa kula yeeshay Wargeyska Geeska Afrika, waxaanu ka xog waramay halka uu shirkaasi marayo iyo weliba isa saamax la sheegay inuu isaga iyo Guddoomiyaha Guurtida oo ay isku beel ka soo jeedaan ku dhex maray shirkaas Gar-adag.
Ugu horayn Axmed-Siilaanyo, oo la weydiiyay inuu ka xog waramo shirka beelaha Habar-jeclo ee ka socda gar-adag oo uu maalmihii u dambeeyay ku sugnaa waxa uu yidhi, “Shirkaasi aad iyo aad ayuu u wanaagsanaa, meel fiicana wuu marayaa, gebagebana wuu ku dhowyahay, shirkuna wuxuu ahaa shir uu deegaanku kaga tashanayay danahooda horumarka deegaanka, nabadgelyada iyo jaar-wanaaga, doorka ay qaranka ku leeyihiin inay ka qayb qaataan dhinac walba, horumarinta gobolada iyo wixii khilaaf ah ee gudahooda jira inay ka saaraan, markaas arrimahaas oo dhami meel fiican ayuu marayaa, shirkuna gebagebo ayuu joogaa, dhawaan ayaana la qaban doonaa xafladii xidhitaanka oo ay suurto gal tahay in lagu martiqaado dad kale oo reer Somaliland ah”.
Axmed Siilaanyo oo ka jawaabayey waxa ka jira wararka sheegaya in shirku burburay oo beelaha qaar ka baxeen, waxa uu yidhi, “Shirka dawladda ayaa aad iyo aad ula dagaalantay, dad beesha ka tirsan oo qaarkood ay sheeganayeen madax-dhaqameedyo ayaa loo adeegsaday, oo markii hore isku dayay inaanu shirkaasi socon, markii dambena damcay intay dhex gallaan ay lugta ku walaaqaan oo ay fashiliyaan, laakiin dadku wuu iska gartay, waxoodiina waxba way ka socon waayeen, iyagii ayuun baa ku ceeboobay oo meel walba laga eryay. Markaas shirkaasi meel fiican ayuu marayay, dalka iyo dadkan wax aan wanaag ahayn uma soo wadaan.”
Mar uu Geeska Afrika, Siilaanyo weydiiyay inuu jiro wax shir ah oo ka socday magaalada Caynabo ee gobolka Saraar oo maalmihii la soo dhaafay la hadal hayay inuu halkaas ka furmay, waxa uu yidhi, “Wax shir ah oo Caynabo ka socday iyo wax ka dhacay toona ma jiraan, kuwo ay dawladu wadato ayaa meesha mar-marayay oo iyagana waa tii halkaasna laga soo eryay.”
Axmed-Siilaanyo, oo la weydiiyay waxa ka jira wararka sheegaya in isaga [Siilaanyo] iyo guddoomiyaha Golaha Guurtida Md. Saleban-Gaal oo isku beel ka soo jeedaa ay shirkaas kaga soo heshiiyeen xurgufo siyaasadeed oo ay kala tabanayeen, waxa uu yidhi, “Waan isugu nimid shirka, maadaama oo aanu labadayaduba deegaanka ka tirsanayn, shirkaana waxa ka dhacay is afgarad wanaagsan, kaas dadka dhexdiisa ka dhacay ayaa annagana [Saleban iyo Siilaanyo] naga dhex dhacay, wax awalna na dhex yiilay may jirin, imikana deegaanka iyo dadka waxaanu u cadaynaynay inaanu u muujino tallo wanaag iyo wada jir, intaasna waanu muujinay, wax ceebaal iyo dhibaato ah oo na dhex yaalaana ma jiraan.”
Axmed Maxamed-Siilaanyo, oo ka jawaabayay su’aal la weydiiyay oo ahayd aragtidiisa ku waajahan eedaynta xukuumadda Somaliland u jeedisay guddoomiye ku xigeenkii hore ee koomishanka doorashooyinka Md. Xirsi Cai Xaaji Xasan, ee ah inuu xidhiidh la leeyahay ururka Al Shabaab ee koonfurta Somaliya ka dagaalama, waxa uu yidhi, “Waxaasi waa xukuumad aan xishoonayn, maxay ugala jeedaa xukuumadu markay halkan ku sheegayso Al Shabaab? Ma waxay doonaysaa inay ku soo hagaajiso dawladaha waaweyn, waa dawlad doonaysa inay dacaayadayso dadkeeda iyo dalkeeda, oo damacday markay rajo beel noqotay ee ay isku dhaceen adhiilihii, saxaafadii iyo shacabkii ee ay umadii ka soo horjeedsatay, ayay doonayaan inay ku soo jeediyaan indhaha xoogag waaweyn oo ay yidhaahdeen dalkayaga Al-qaaciidaa ka dilaacday, waa calaamaad lagu yaqaan keli taliyayaasha iyo dawladda fashilanta, dunida iyos shacabkuba waa ogyihiin wax alla wax ka jiraana ma jiraan, iyagaana ceebtaas iyo eedaas qaba, waxaanan leenahay xishooda oo wax isku fala.
Waa la ogaa markii ay yidhaahdeen KULMIYE ayaa ka dambeeyay qaraxii Golaha Guurtida, haddana maalintii dambe ay dafireen, ha soo cadeeyaan waxay sheegayaan, maalin walba ninkan wasiirka ah ee aan xishoonayn ee leh KULMIYE ayaa ka dambeeyay iyo Al-qaaciidaa ka dambaysay, xishoon maayo oo isla yaabi maayo. Markaas waa ayaan darro in taas [xukuumadda] lagu tilmaamo inay shacabkii dawlad u tahay.”
Source: Wargeyska Geeska Afrika, Hargeysa
Dawalada Rayaale Oo Sharci Daro U Xidhay Gudoomiyihii Hore Ee Komishanka Qaranka.
August 4th, 2008 in Uncategorized | Comments Off
Gudoomiye Ku Xigeenkii Hore ee Komishanka Doorashooyinka Oo Xabsiga Loo Taxaabay.
Hargeysa(Golis)-Gudoomiye Ku Xigeenkii hore ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Xirsi Cali X. Xasan ayaa xabsiga loo taxaabay, kadib markii ay xalay ciidamada Boolisku ka qabteen Tuulada ina Af-madoobe oo 60KM dhinaca bari ka xigta Magaalada Burco.
Taliyaha Qaybta booliska ee Gobolka Togdheer Axmed Maxamed Guutaale ayaa noo xaqiijiyey xadhiga masuulkan, waxase uu ka gaabsaday inuu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyo sababta rasmiga ah ee ka dambeysa xadhigan.
Ciidamada Amaanka Somaliland ayaa maalmihii u dambeeyey sameeyey hawl-galo xoogan, kuwaasi oo ka fulinayeen Gobolada Marood-Jeex, Saaxil iyo Togdheer, iyadoo goobaha qaarkood ciidamo dheeraad ah la geeyey, illaa haddase lama oga sababta wakhtigan kelliftay hawl-galadan.
Xirsi Cali X. Xasan oo hadda ku xidhan saldhiga Dhexe ee Magaalada Burco ayaa xilkii xubin-nimada Komishanka iska casilay, kadib markii ay xubnaha guddidu ka qaadeen Gudoomiye Ku Xigeenkii Guddida, waxana uu dhaliilo ba’an usoo jeediyey Komishanka Doorashooyinka iyo Madaxweyne Rayaale.
Xigasho / Golisnews